မေလအကုန်လောက်မှာရောက်ရှိလာနိုင်ခြေရှိတဲ့ iPhone SE 2! – AsiaApps
မေလအကုန်လောက်မှာရောက်ရှိလာနိုင်ခြေရှိတဲ့ iPhone SE 2!
April 23, 2018 April 23, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on မေလအကုန်လောက်မှာရောက်ရှိလာနိုင်ခြေရှိတဲ့ iPhone SE 2!
Apple အနေနဲ့ iPhone SE Second generation (iPhone SE 2) ကိုတော့ မေလအကုန်လောက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ရောက်ရှိလာမယ့် iPhone SE2ဟာ Apple ရဲ့ နောက်ဆုံး Flagship ဖြစ်တဲ့ iPhone X လိုကွဲထွက်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင် ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပဲ ရှေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ iPhone SE ကိုအခြေခံထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေမှာပါ။ Touch ID ပါဝင်တာ၊ ဖုန်းရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၄ လက်မဖြစ်နေတာ၊ ဖုန်းကို အာလူနီမီယမ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ အစရှိတာတွေက iPhone SE နဲ့အကုန်အတူတူဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် iPhone SE လိုတော့ Headphone jack ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Headphone jack မပါဝင်တာကတော့ တော်တော်လေးဆာပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘက်ထရီသွင်းရင်းနဲ့ ဖုန်းသုံးလို့မရတော့လို့ပါ :’D .. (နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုဖို့ extension ဝယ်လို့ရပေမယ့် အလကားကြီးပိုက်ဆံကုန်သလိုခံစားရလို့ပါ ?)။ iPhone7နဲ့ နောက်ထွက် iPhone model တွေကိုင်နေသူ အဖို့တော့ ဒီပြဿနာကို ကျင့်သားရနေပြီဖြစ်တာကြောင့် easy-going ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် iPhone SE2မှာ iPhone7မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ A10 fusion processor ပါဝင်မှာပါ၊ သို့ပေမယ့် iPhone SE2ရဲ့ A10 fusion processor ဟာ iPhone7ထက်အနည်းငယ်ပို ပြီးသာနေမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ သိရပါတယ်။ SE2ကို RAM 2GB, 32GB (သို့) 128GB Storage နဲ့မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
ဖုန်း စတင်မိတ်ဆက်မယ့် ရက်ကို မေလအကုန်လို့ဆိုထားပေမယ့် ဇွန်လဖြစ်ဖို့ကပိုများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇွန်လမှာက ၄ ရက်နေ့ကနေ့ ၈ ရက်နေ့အထိ နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ WWDC (Apple Worldwide Developer Conference) 2018 ကြီးရှိနေလို့ပါ။ တော်တော်များများကမေလကုန် (သို့) မေလထဲမှာလို့ခန့်မှန်း ထားကြပေမယ့် logic နဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့ (အယ်လယ်.. ?) WWDC ရှိနေတဲ့ ဇွန်လမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလှပါတယ်။
Source (In JP), Via
Privacy မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးထားတဲ့ Data Policy အသစ်တစ်ခု ထပ်မံပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Facebook
Screenshots တွေကို တစ်ဆက်တည်း တွဲစပ်ပေးမယ့် Stitch It! – Screenshot Editor